excess of life: Dadka qaar waxay soo wici midhahan magaca
Dadka qaar waxay soo wici midhahan magaca Fruit ilaahyo. Ilaa hadda, miro masduulaagii ahaa ee Indonesia u baahan doonaan waaweSARANAPOKER.COM AGEN TEXAS POKER DAN DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA yn iyo ma ahan oo keliya suuqa maxaliga ah oo doonaya in ay dhadhamiyaan awesomeness midhahu deymaha waxbarashada this. Fursadaha dhoofinta sidoo kale aysan jirin baaxaddeeda yar, si kastaba ha ahaatee weyn loo baahan yahay ma awoodo inuu rumoobo by-soo-saarka dalka ee asalkooda (Taiwan) Waxaa intaa dheer, xaaladda on Indonesia ee way adag tahay in la kulmo fursadaha suuqa kuwaas, maxaa yeelay, wax la xidhiidha maalgelinta cimilada ku dhacaan itaal darnaadaa. Laakiin aragtay eego iman kara Wialyah beeraha waaweyn iyo xaqse, sare leh lagama yaabo inay horumariyaan midhahaas.
Miro Dragon ayaa muddo dheer loo yaqaan by dadka Chinese qadiimiga sida miraha barako. sababtoo ah sida caadiga ah dhexdiina isjacayl taallada masduulaagii aad miro masduulaagii aad meesha allabariga.
Sidaa darteed, ka miro masduulaa Vietnamese ama wac in Vietnamese waxaa lagu magacaabaa by magaca Thang Loy Thailand magacaabay Mang Kheon Keaw, in English istiiah magacaabay qabiil masduulaa MIRAHA ee Indonesia oo loo yaqaan Bum Naga Dhab tani ma aha qaarad acyl dhirta miraha beeraha ah oo Asia, laakiin weydiin qabiil Mexico warshad waqooyiga South America (Colombia). In miro masduulaa awainya keenay kekawasan Indochina (Vietnam) by Faransiis ah 1870. Badan Guyama South America sida wax sharraxsan, sababtoo ah iyada tiradaasi waa mid gaar ah iyo ubaxyo qurux iyo caddaan. New agaSeasonbet77 Agen Bola Resmi Promo 100% SBOBET IBCBET Sambut Piala Dunia 2014gaarka 1980 ka dib waxaa la keenay anything Japan warshad this adduunka, sababtoo ah waa mid aad u faa'iido leh. In 1977 midhaha keenay in ay qabiil Indonesia si guul ah lagu beeray dambe kaymo. Miro Dragon waa hodan ku fitamiin iyo macdan leh fiber ku filan samaynta waxa ku haboon cunto ah.
Codsiyada faraha badan ayaa miraha masduulaa waxa sababa kor u qaadida wicitaan sida miraha miis (Very soo jiidanayaa iyo durugsan markii ugu adeegi jireen miiska) kadsoomin Efficacious for cudurro kala duwan oo waa faa'iido leh sida wax a cayriin oo duurka ku soo saarka of Food, Beverage, alaabada la isku qurxiyo iyo caafimaadka. Diriddaada shardi ah in intooda badan beeralayda yihiin wax ka yar awoodaan inay maalgashadaan qaybtan (qiimaha sare oo farcankii iyo qalabka ay tahay in la baxshay). Ma ka mid ah xiisaynta mulkiilayaashii caasimadda si ay ula kooxaha beeraley ah ee beerista ee badeecadaha this shaqeeyaan. Adalh taageero kale oo la heli karo ka iman kara hadafkiisa oo ah dalka iyo beerista khubaro ah ee noocan ah dhirta.
QAABABKA MIRAHA masduulaa
Miro Dragon (Hylocereus undatus ama Dragon Fruit) weli waxaa ka mid ah badeecadaha dhif ah in Indonesia. Miraha yihiin beasal ee Taiwan uu leeyahay qaab aad u gaarka ah iyo ilaa xad soo jiidasho leh si ay u eegaan. Foomka Jirka la mid miro cananaaska uu leeyahay oo kaliya tendrils / Tufts oo dhan uu maqaarka iyo midhGudangPoker.com Situs Judi Poker Online Terbaik Terpercayaaha waa casaan (Pink) oo leh midab leh jidhka noocyo kala duwan waxaa ka mid ah White, Yellow iyo Red abuur yar oo madow ay yihiin kuwo aad curdan tahay oo jilicsan. Iyadoo ku xiran nooca eegtid midabka jidhka midhaha, midabka cas la egtahay iyo Marka macaan oo dhegdheg leh Haatuf dhadhan ay aad u soocaya.
Posted by Juragan Channel at 2:31 AM